: at 6/23/2010 09:00:00 PM
ဝက်ဝံလေး said... | Wednesday, June 23, 2010 9:25:00 PM
နာမယ် ဖွားကိ ဟင်းးဟင်းးး တကယ်များလားလို့ သူ့ချစ်သူက အဟွန့်နော် တီတီတို့အိမ်ရောက်နေတယ် သိလား မအားဘူးနော် အပြေးလာတယ် ပြန်ဘီ ဘိုင်
မမသီရိ said... | Wednesday, June 23, 2010 9:37:00 PM
မြန်မာပြည်ထဲ လဲ ဘလော့ ရေးလို့ ရတယ်လေ
တိတ်တိတ်လေး ရေး ပေါ့
အစအစ အရာအရာ အဆင်ပြေပါစေ
ကိုဇော် said... | Wednesday, June 23, 2010 9:53:00 PM
ဟုတ်ပါတယ်လေ. . .
မိုးခါး said... | Wednesday, June 23, 2010 10:40:00 PM
ပျော်ရွှင်ဖွယ် အိမ်ပြန်ခရီးလေးဖြစ်ပါစေ ..
ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ ဆီးကြိုနေပါစေနော် .. ချစ်သူလေးပါ တပါတည်းခေါ်သွားလေ
အဆင်ပြေမှာပါ .. ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ ..း))
မြတ်မွန် said... | Wednesday, June 23, 2010 11:53:00 PM
မမကိ တစ်ရက်လောက် ထမင်းသွားစားရအောင်လား..။
ချစ်သူလေးကိုပါ ခေါ်သွားပါ မမကိရယ်..။
ရန်ကင်းမှာ ချစ်သူလေးကို အဆင်ပြေပြေ အသုံးပြုလို့ရပါတယ် မမရယ်..။
အချိန်တန် အိမ်ပြန်တာ ပျော်စရာပေါ့ မမရယ်..။
Shinlay said... | Wednesday, June 23, 2010 11:54:00 PM
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) said... | Wednesday, June 23, 2010 11:56:00 PM
ရွှေပြည်ကြီးမှာ အစစ အဆင်ပြေ ချောမွေ့ပါစေနော်..
Anonymous said... | Thursday, June 24, 2010 12:05:00 AM
မကိ ဘယ်လိုလဲ ရှက်ဂျူးများ မှားနေသလား
ခြင် said... | Thursday, June 24, 2010 12:31:00 AM
ဂွီးးး..စထဲက ထင်နေတာ... လပ်ပတွတ်လား..... ဖွဘွတ်စ်လား... ကော်နက်ရှင်လား.... တခုခုထဲက ပါရမယ်.... ငါတွက်တာ မလွဲလောက်ဘူးဆိုပြီး ပြုံးပြုံးကြီးဖတ်နေတာ....
(သူက လဘော့ကို ပြောဒါကိုး..... ဟွန်းးးးး)
လသာည said... | Thursday, June 24, 2010 5:38:00 AM
ရွှေရတုမှတ်တမ်း said... | Thursday, June 24, 2010 6:06:00 AM
khin oo may said... | Thursday, June 24, 2010 6:24:00 AM
ဧပရယ်လ်ပူး@ပူးတေ said... | Thursday, June 24, 2010 9:21:00 AM
ချစ်သူလေးနဲ့ အပေါင်းပါတွေကို အပြီးပြတ်ကြီးတော့ ခွဲမသွားပါနဲ့နော်။ မကြာမကြာ ပြန်လာကြည့်ပေးပါ။ မမကိ ချစ်သူနဲ့အတူတူ ပူးတေတို့က မမကိကို မျှော်နေကြမှာပါ.....
Anonymous said... | Thursday, June 24, 2010 9:38:00 AM
ဖွားကိ သတိရှိပါစေ အဟေးး
ချစ်သူကိုတော့ မခွဲသွားနဲ့ လက်ရှိ ချစ်သူကို ဖွက်ထားပြီး နောက်တယောက် ရှာပေါ့ဗျာ
rose of sharon said... | Thursday, June 24, 2010 9:40:00 AM
ကိရယ်... လွမ်းအောင်လည်းရေးတတ်တယ်... အမျိုးမျိုးတတ်နိုင်တဲ့ကိ... ရီစရာလေးတွေကနေ အလွမ်းလေးရေးတော့လည်း ဖတ်လို့ကောင်းတာဘဲ
ခိုင်နုငယ် said... | Thursday, June 24, 2010 10:00:00 AM
သဒ္ဓါလှိုင်း said... | Thursday, June 24, 2010 11:40:00 AM
ahphyulay said... | Thursday, June 24, 2010 8:26:00 PM
စ ကတဲ က ထင် သားပဲ။
တစ်ခု ခု တီထွင် တော့မယ် ဆိုတာ ။
အခု အဲ့ ဒီ ချစ်သူ နဲ့မတွေ့ရတော့ လို့ 
လူသတ် ချင် နေတာ မှုတ်လား..။
မောင် လေး said... | Thursday, June 24, 2010 8:57:00 PM
ခြေလှမ်းသစ် said... | Friday, June 25, 2010 11:24:00 AM
ဖွားကိေ၇ အကြောင်းလေးတော့ ပြန်ကြားအုံးနော် ...
thawzin said... | Friday, June 25, 2010 11:06:00 PM
ဘာပဲပြောပြောဗျာ လက်ရှိကျွန်တော်တို့ အရွယ်မှာ အချစ်မရှိရင်တော်တော်ကို ပျင်းခြောက်နိုင်လှတယ်။ ချစ်ရသူရှိရင်လဲ ပင်ပန်းပါသေးတယ်။ သစ္စာရှိတဲ့ချစ်သူရှိမှစိတ်ချမ်းသာနိုင်တာ။ သူငါ့ကိုသစ္စာရှိနေပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ အရာအားလုံး အဆင်ပြေအောင်နေတက်ထိုင်တက်လာတယ်။ ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပါ ကျွန်တော်ထင်တာပြောတာ။ အစ်မကြီးကီ ချစ်သူလဲ အစ်မကြီးအပေါ် သစ္စာရှိရှိနေသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါစေလို့ ကိုယ်ချင်းစာမိတာလေး ဆုတောင်းပေးတာပါ။ လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတာတော့ သိဘူးလေ။ ကိုယ်ချစ်ရသူက သစ္စာမရှိပဲ Two-Way ဆိုတဲ့ အဖြစ်မျိုးလောက် အစော်ကားခံရတဲ့အလုပ် မရှိဘူးထင်တယ်နော်။ မုန်းချင်မုန်းသွားတာတော်သေးနော်။ မမုန်းပဲ နှစ်ယောက်ပြိုင်ထားခံရတာလောက် စိတ်ညစ်စရာမရှိဘူး အစ်မရေ။ ပို့စ်နဲ့တော့ ဘာမှဆိုင်ဘူးနော် ဟီးဟီး။ လက်ရှိကိုယ့်အဖြစ်လေးနဲ့ ကြုံတော့ ရင်ဖွင့်သွားတာပါ။ ငါ့ အစ်မကြီးတစ်ယောက်တော့ အမျိုးကောင်းသားလေး တစ်ယောက်နဲ့ ဆုံဆည်းပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေနော်။
Unknown said... | Friday, June 25, 2010 11:10:00 PM
အဟုတ်ထင်လို့ ၀င်ကြည့်မိပါတယ် လက်စပ်သတ်တော့
မယ်ကိက ဘလောဂ့် ပရိုမိုရှင်းလုပ်တာကို ဟို ဟို ဟို
yanmyo said... | Saturday, June 26, 2010 2:00:00 AM
အင်ကြင်းသန့် said... | Saturday, June 26, 2010 11:22:00 AM
မမကိကိရေ....အစစအရာရာ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေနော်....ဒီချစ်သူလေးကတော့ မမကိကိ အပေါ်မှာ ဘယ်တော့မှ သစ္စာဖောက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး....ညီမလေးတို့တွေကိုလည်း သတိရနေပါနော်....
Anonymous said... | Saturday, June 26, 2010 2:16:00 PM
အမေနဲ့ ချစ်သူကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်လေ မကိ..
... အခွင့်ရတဲ့ အခါတော့ စာလေးတွေ ရေးပါဦး.. အားလုံးလိုပဲ တို့လဲ လွမ်းနေမှာပါ.ယယ
~ဏီလင်းညို~ said... | Sunday, June 27, 2010 8:51:00 PM
မြစ်ကျိုးအင်း said... | Monday, June 28, 2010 2:11:00 AM
ထိုင်ဝမ်က ဘလော့ဂါ တစ်ယောက် လျော့သွားရပြီပေါ့။
အကြောင်းသိတွေမို့လို့ ဒါ ပြန်ခါနီး ကြွား နေတာထင်ထားရဲ့နဲ့ သွားနှိပ်မိလိုက်သေးတယ် ခံ လိုက်ရတယ်ပေါ့။ ပြန်ခါနီးတောင် အားလုံးကို ပျော်ရွှင်စေတဲ့ မကီလည်း အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေဗျာ။ ကောင်းသော သာယာသော ခရီးလမ်းလေး ဖြစ်ပါစေ။
လသာည said... | Wednesday, June 30, 2010 8:03:00 PM
Anonymous said... | Wednesday, June 30, 2010 11:43:00 PM
အချိန်ရရင် အဆင်ပြေရင် စာတွေရေးပါ..လို့
Nge Naing said... | Thursday, July 15, 2010 7:44:00 PM
ကိကိရေ ဒီပို့စ်ကို အခုမှ ဖတ်ဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်ပြန်တာ ချစ်သူနဲ့ ခွဲစရာမှမဟုတ်တာ။ အချိန်ပေးနိုင်မှု နည်းသွားတာပဲ ကွာမှာပါ။ ဘလော့ဂ်တော့ မမသီရိပြောသလို ဆက်ရေးလို့ရပါတယ်။ ကိကိရေ ကျွန်မလည်း မအားတာနဲ့ ဘယ်သူ့ဘလော့ဂ်ကိုမှ မရောက်ဖြစ်ဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ အဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုတောင်းနေပါတယ်။